ဗမာစကားပွောတတျသူ မရှိတဲ့ရှာလေးမှာ နထေိုငျရတဲ့ အတှအေ့ကွုံကို ပွောပွလာတဲ့ ထားထကျထကျ – Shwe Yaung News
ဖုနျးပွောခငျြရငျ အပျေါထပျ ဒီအခနျးထောငျ့လေးကနေ တကျပွောရတယျ။ ရှာကလဲ အရေးအကွောငျးဆို ဒီနရောလေးအထိ လာပွောရတာပဲ။ ဖုနျးလိုငျးမမိ၊ မွနျမာစကားပွောတတျသူ လကျခြိုးရလေို့ရတဲ့ ရှာကလေးတဈခုကို ရောကျခဲ့ခြိနျ အိမျရှငျအမက ကြှနျမဖုနျးသုံးဖို့
နရောလေးညှနျပွပွီး ပွောခဲ့တဲ့ စကားလေးပါ။ ညစာစားဖို့ ပွငျဆငျကွခြိနျ မွနျမာစကားတတျတဲ့ ခရဈယာနျသငျးအုပျဆရာရဲ့ အမြိုးသမီးက သူ့ရဲ့အိမျနီးခငျြးဖွဈတဲ့ ကရငျတိုငျးရငျးသူ အမနဲ့အတူတူထိုငျရငျး ကြှနျမကိုပွောပွတယျ။
သူ(အိမျနီးခငျြးအမ) ကမွနျမာစကား မပွောတတျဘူး။ တတျလဲ မတတျခငျြဘူး။ မသငျခငျြဘူးတဲ့ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူအသကျ ၁၀ နှဈသမီးလောကျက စဈဘေးရှောငျတဲ့ ဒု.က.်ခတှကေို ကိုယျတှကွေုံ့ခဲ့ရတယျ။ တျောတျောပငျပနျးတဲ့ ဒု.က.်ခဆငျးရဲတှေ ခံစားခဲ့ရတယျ။ စဈဘေးရှောငျရတဲ့
အခြိနျတုနျးက မိသားစု စားဖို့ ရိက်ခာသယျသှားရတဲ့အခါ ဆနျအိတျကို ခေါငျးပျေါရှကျလို့ မတျတပျအိပျရတဲ့အခါတှတေောငျ ရှိခဲ့တယျတဲ့။ ဆနျအိတျခပြွီးနားရငျ ပွနျပွီး မ, တငျဖို့ မနိုငျလို့တဲ့ ရှာပွနျရောကျတဲ့အခါလဲ နစေရာအိမျကွ.ပ.ာ ကအြောငျ မီ.းတို.ကျ.ခံ.
ထားရသလို အိမျမှေးတိရစ်ဆာနျတှကေိုလဲ စိတျကွိုကျယူဆောငျ သှားကွသေးသတဲ့။
ပွီးတော့ ဗမာစဈသားတှကေ ကရငျတိုငျးရငျးသားတှကေို ရှာလုံးကြှတျသ.တျွ.ဖ.တျတာတှေ၊ သ.တျတဲ့အခါလဲ ခကျြခငျြးမသ.တျပဲ ရ.ကျရ.ကျ စ.ကျစ.ကျ နားရှကျကွို.ဖ.တျ၊ မကျြလုံးတှေ
ေ.ဖ.ာ.ကျ.ထု.တျနဲ့ သ.တျတာတှေ ကွုံခဲ့ရတယျ ဆိုတဲ့အကွောငျး ပွောပွပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဗမာတှဆေို သိပျမု.နျ.းတာ ဗမာစကားကို လုံးဝမတတျခငျြ မပွောခငျြဘူး မသငျခငျြဘူး ဗမာတှနေဲ့ စကားပွောနရေမှာစိုးလို့တဲ့။ အဲ့လိုစကားတှေ နားထောငျနရေတဲ့အခြိနျ
ကြှနျမအငျမတနျ စိတျမကောငျး ဖွဈရပါတယျ။ ကြှနျမမကျြနှာ ဘယျနားထားရမှနျး မသိအောငျ အားနာပွီး မကျြနှာတှပေူနမေိတယျ။ အရငျက ဒီလိုနာကွညျးစိတျတှရှေိတဲ့ အမက အခုသူတဈခါမှမမွငျဖူးတဲ့ ကြှနျမကို မတ်ေတာပွဆကျဆံပေးပွီး ကြှနျမတို့စားဖို့အတှကျ
ညစာအဖွဈ ကွကျဥကွျောပွီး လာပို့ပေးခဲ့တယျ။
သူတို့ရဲ့နှေးထှေးမှု၊ သဘောထားကွီးမှု၊ ခံစားခကျြနဲ့ အိမျရှငျ ဝတ်တရားခှဲခွားထားနိုငျမှု၊ ဂရုစိုကျမှုနဲ့ ခဈြခွငျးမတ်ေတာတှကေို ကြှနျမ သိပျကြေးဇူးတငျမိပါတယျ။ သူတို့နရောလေး ဆကျသှယျရေးအဆငျပွပွေီး ဖုနျးလိုငျးမိဖို့
ကြှနျမနိုငျရာ ဆောငျရှကျပါဦးမယျ။ ဗမာတိုငျးရငျးသား အပါအဝငျ အခွားတိုငျးရငျးသား လူမြိုးတိုငျးဟာ အနညျးအမြားသာ ကှာခငျြကှာမယျ စဈအာဏာရှငျကွောငျ့ ဒု.က.်ခရောကျရတာခငျြး အတူတူဖွဈတဲ့အကွောငျး အခှငျ့ရတဲ့တဈနကေ့ရြငျ ကြှနျမပွနျသှားပွီး
ကရငျဘာသာနဲ့ အေးအေးဆေးဆေး စကားပွောဖွဈဦးမယျ ထငျပါတယျ။ ရှုခငျးတှကေ ဓါတျပုံရိုကျဖို့ ရူးခငျြစရာ ကောငျးလောကျအောငျ လှတဲ့ ပတျဝနျးကငျြဖွဈနတောကလဲ ပွနျသှားခငျြစရာကွီးကိုး။ နှေးထှေးမှုအတှကျ ကြေးဇူးပါ အမတို့ရေ။
ဗမာစကားပြောတတ်သူ မရှိတဲ့ရွာလေးမှာ နေထိုင်ရတဲ့ အတွေ့အကြုံကို ပြောပြလာတဲ့ ထားထက်ထက်
ဖုန်းပြောချင်ရင် အပေါ်ထပ် ဒီအခန်းထောင့်လေးကနေ တက်ပြောရတယ်။ ရွာကလဲ အရေးအကြောင်းဆို ဒီနေရာလေးအထိ လာပြောရတာပဲ။ ဖုန်းလိုင်းမမိ၊ မြန်မာစကားပြောတတ်သူ လက်ချိုးရေလို့ရတဲ့ ရွာကလေးတစ်ခုကို ရောက်ခဲ့ချိန် အိမ်ရှင်အမက ကျွန်မဖုန်းသုံးဖို့
နေရာလေးညွှန်ပြပြီး ပြောခဲ့တဲ့ စကားလေးပါ။ ညစာစားဖို့ ပြင်ဆင်ကြချိန် မြန်မာစကားတတ်တဲ့ ခရစ်ယာန်သင်းအုပ်ဆရာရဲ့ အမျိုးသမီးက သူ့ရဲ့အိမ်နီးချင်းဖြစ်တဲ့ ကရင်တိုင်းရင်းသူ အမနဲ့အတူတူထိုင်ရင်း ကျွန်မကိုပြောပြတယ်။
သူ(အိမ်နီးချင်းအမ) ကမြန်မာစကား မပြောတတ်ဘူး။ တတ်လဲ မတတ်ချင်ဘူး။ မသင်ချင်ဘူးတဲ့ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူအသက် ၁၀ နှစ်သမီးလောက်က စစ်ဘေးရှောင်တဲ့ ဒု.က.္ခတွေကို ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရတယ်။ တော်တော်ပင်ပန်းတဲ့ ဒု.က.္ခဆင်းရဲတွေ ခံစားခဲ့ရတယ်။ စစ်ဘေးရှောင်ရတဲ့
အချိန်တုန်းက မိသားစု စားဖို့ ရိက္ခာသယ်သွားရတဲ့အခါ ဆန်အိတ်ကို ခေါင်းပေါ်ရွက်လို့ မတ်တပ်အိပ်ရတဲ့အခါတွေတောင် ရှိခဲ့တယ်တဲ့။
ဆန်အိတ်ချပြီးနားရင် ပြန်ပြီး မ, တင်ဖို့ မနိုင်လို့တဲ့ ရွာပြန်ရောက်တဲ့အခါလဲ နေစရာအိမ်ကြ.ပ.ာ ကျအောင် မီ.းတို.က်.ခံ.
ထားရသလို အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကိုလဲ စိတ်ကြိုက်ယူဆောင် သွားကြသေးသတဲ့။ ပြီးတော့ ဗမာစစ်သားတွေက ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေကို ရွာလုံးကျွတ်သ.တ်ြ.ဖ.တ်တာတွေ၊ သ.တ်တဲ့အခါလဲ ချက်ချင်းမသ.တ်ပဲ ရ.က်ရ.က် စ.က်စ.က် နားရွက်ကြို.ဖ.တ်၊ မျက်လုံးတွေ
ေ.ဖ.ာ.က်.ထု.တ်နဲ့ သ.တ်တာတွေ ကြုံခဲ့ရတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း ပြောပြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဗမာတွေဆို သိပ်မု.န်.းတာ ဗမာစကားကို လုံးဝမတတ်ချင် မပြောချင်ဘူး မသင်ချင်ဘူး ဗမာတွေနဲ့ စကားပြောနေရမှာစိုးလို့တဲ့။ အဲ့လိုစကားတွေ နားထောင်နေရတဲ့အချိန်
ကျွန်မအင်မတန် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပါတယ်။ ကျွန်မမျက်နှာ ဘယ်နားထားရမှန်း မသိအောင် အားနာပြီး မျက်နှာတွေပူနေမိတယ်။ အရင်က ဒီလိုနာကြည်းစိတ်တွေရှိတဲ့ အမက အခုသူတစ်ခါမှမမြင်ဖူးတဲ့ ကျွန်မကို မေတ္တာပြဆက်ဆံပေးပြီး ကျွန်မတို့စားဖို့အတွက်
ညစာအဖြစ် ကြက်ဥကြော်ပြီး လာပို့ပေးခဲ့တယ်။
သူတို့ရဲ့နွေးထွေးမှု၊ သဘောထားကြီးမှု၊ ခံစားချက်နဲ့ အိမ်ရှင် ဝတ္တရားခွဲခြားထားနိုင်မှု၊ ဂရုစိုက်မှုနဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို ကျွန်မ သိပ်ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ သူတို့နေရာလေး ဆက်သွယ်ရေးအဆင်ပြေပြီး ဖုန်းလိုင်းမိဖို့
ကျွန်မနိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ပါဦးမယ်။ ဗမာတိုင်းရင်းသား အပါအဝင် အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးတိုင်းဟာ အနည်းအများသာ ကွာချင်ကွာမယ် စစ်အာဏာရှင်ကြောင့် ဒု.က.္ခရောက်ရတာချင်း အတူတူဖြစ်တဲ့အကြောင်း အခွင့်ရတဲ့တစ်နေ့ကျရင် ကျွန်မပြန်သွားပြီး
ကရင်ဘာသာနဲ့ အေးအေးဆေးဆေး စကားပြောဖြစ်ဦးမယ် ထင်ပါတယ်။ ရှုခင်းတွေက ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ ရူးချင်စရာ ကောင်းလောက်အောင် လှတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်နေတာကလဲ ပြန်သွားချင်စရာကြီးကိုး။ နွေးထွေးမှုအတွက် ကျေးဇူးပါ အမတို့ရေ။
တူမလေးရဲ့Stitch အရုပျနဲ့အလှဆငျထားတဲ့ ကားကိုမောငျးနှငျခဲ့ရတဲ့ ခံစားခကျြတှကေို ဝမြှေလာခဲ့တဲ့ အမြိုးသား